6S managerment systerm & လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး
ပြုပြင်ပစ္စည်းများ Turbo မြှေး
Bulkhead connector ကို
လူပျိုခေါင်းကို bulkhead connector ကို
နှစ်ချက်ခေါင်းကို bulkhead connector ကို
သွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင် controller ကို DMK-3CS-6 baghouse filter ကို
, CA-76T, RCA-76T DC24V / AC220V DIN43650A connector ကို0င် ...
FOB စျေး: အမေရိကန် $5- 10 / Piece
DB16 နှင့် DB120 မြှေးပြုပြင်ပစ္စည်းများ21/2 "mecair VNP220 VEM220 ဖုန်မှုန့် Controller ကိုအဆို့ရှင်
1. မြှေးပြုပြင်ကိရိယာအစုံ DB120 "MECAIR 2.5 များအတွက်သွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင် VNP220 VEM220 ဝတ်စုံကိုခဲ့
2. မြှေးပစ္စည်း: စီးပွားဖြစ်မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အင်ဂျင်နီယာ thermoplastic elastomer သို့မဟုတ် Viton
သင်တစ်ဦးကြီးမားသောအရေအတွက်လိုအပ်ခဲ့လျှင်3ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အကြီးတွေလျှော့စျေးပေးနိုင်ပါသည်။
4. ကျွန်ုပ်တို့သည်ငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံရရှိသည့်အခါကျွန်တော်ကြောင့် ASAP store မှာအများအပြားစေလွှတ်လိမ့်မည်ရှိသည်ဟုအဆိုပါထုတ်ကုန်။
pallet အားဖြင့် package
loading အချိန်: ငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံရရှိ 3-5 ရက်အကြာမှာ
အာမခံ: ကျွန်တော်တို့ရဲ့သွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်နှင့်အစိတျအပိုငျးအာမခံအားလုံးအဆို့ရှင်အခြေခံ 1.5 တစ်နှစ်ရောင်းသူအာမခံနှင့်တကွကြွလာ 1.5 တစ်နှစ်အတွက်ကို item ချွတ်ယွင်းလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ချွတ်ယွင်းထုတ်ကုန်ကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်, ကျနော်တို့ (ရေကြောင်းကြေးအပါအဝင်) အပို charger ကိုမပါဘဲအစားထိုးပူဇော်မည်, 1.5 တစ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်သိုလှောင်မှုများသည့်အခါချက်ချင်းငွေပေးချေပြီးနောက်ကယ်နှုတ်စီစဉ်ပါလိမ့်မယ် 1 ။
2. ကျနော်တို့အချိန်ပေါ်စာချုပ်ထဲမှာကိုအတည်ပြုပြီးနောက်ကုန်စည်များကို ပြင်ဆင်. , ASAP ကုန်ပစ္စည်းစိတ်ကြိုက်နေကြသည်အတိအကျအခါစာချုပ်အတိုင်းလိုက်နာအပ်မည်
3. ကျနော်တို့ထိုကဲ့သို့သောပင်လယ်နားမှာကအဖြစ်ကုန်ပစ္စည်းများပေးပို့ဖို့နည်းလမ်းတွေ, အမျိုးမျိုးရှိသည်, လေကြောင်းခရီးဖြင့်, DHL အဖြစ်ဖော်ပြ ဒါကြောင့်အပေါ် Fedex, TNT နှင့်။ ငါတို့သည်လည်းဖောက်သည်များကစီစဉ်ပေးအပျတျောမူလက်ခံပါ။
ယခင်: Nitrile မြှေးပြုပြင်ပစ္စည်းများ DB114 mecair 1.5 "သွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင် VNP214 VNP314
နောက်တစ်ခု: DB116 NBR မြှေးပြုပြင်ပစ္စည်းများ Mecair2"VNP216 VEM216 ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းဆို့ရှင်
Air ကိုသန့်ရှင်းရေး Pulse Valve
သန့်ရှင်းရေးစနစ်များ Pulse Solenoid Valve
ထိန်းချုပ်ရေး Valve Dn50
DB112 မြှေးပြုပြင်ပစ္စည်းများငါ့ကို membrane nitrile ...
DB16 မြှေး 3/4 "Nitrile mecair သွေးခုန်နှုန်း ...
DB116 NBR မြှေးပြုပြင်ပစ္စည်းများ Mecair2" ...
နေရပ်လိပ်စာ: Pukou စက်မှုဇုံ, Shengzhou, Zhejiang, တရုတ် (ပြည်မ) / 312400